ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဘယ်လဲ၊ ဘာလဲ ? - Chin World
Home Article ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဘယ်လဲ၊ ဘာလဲ ?
ရေး – Lian Tuang
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကောင်းရော အဆိုးပါ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုအနည်းအကျဉ်း ရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုမှာ မရှိသလောက် နည်းပါးသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများသည် ၂၀၁၅ ရွှေးကောက်ပွဲမှ တစ်ဆင့် ကြိုတင်မဲဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒနှင့် ခံစားချက်များကို NLD လမ်းကြောင်းဖြင့် နာဂစ် ကဲ့သို့ အရှိန်ပြင်းစွာ ဖွင့်ချဖော်ပြခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့အပေါ် မလိမ့်တပတ် မျှော်လင့်ချက်ပေး၍ သော်လည်းကောင်း၊ မိမိဒေသ အတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စား ယှဉ်ပြိုင်မှု များစွာဖြင့် သော်လည်းကောင်း စသည့် အကြောင်းတရားများစွာဖြင့် ယနေ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် လွှတ်တော်
၂၀၁၅ ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသည် နိုးကြားတက်ကြွှစွာဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးကြသည်။ ရွှေးကောက်တင်မြောက်ကြသည်။ ရလဒ် အပေါ် ဝမ်းသာကြသည်။ ပီတိဖြာကြသည်။ ရွှေးကောက်ပွဲ နှောင်းပိုင်း အကူးအပြောင်းကာလများတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်သူများမှ စိတ်ဝင်တစား နားစွင့်စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ယခင် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ မှ တာဝန်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဝန်ကြီးချုပ် ရွှေးချယ်တင်မြောက်ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစိုးရတာဝန်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အစိုးရသစ်နှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဆောင်းမနက်ခင်း ရောင်နီဦး ကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို မျှော်လင့်ချက်အသစ်၊ ယုံကြည်မှုအသစ်များဖြင့် လန်းဆန်းတက်ကြွစေခဲ့ပါသည်။
သို့သော်လည်း အကူးအပြောင်းကာလ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကြီးသည် လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လျှော့ပါးလာပြီး မီဒီယာ စာမျက်နာများမှ လည်း တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သလို ဖြစ်လာပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် တွင် ကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို သိရှိသူမှာ ၇၃% ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်စားလှယ်များ၏တာဝန်နှင့် လွှတ်တော်တွင်းလုပ်ငန်းများ သိရှိနားလည်ထားသူမှာ ၁၉% ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်သူလူုထုကြားတွင် ကြီးမားသော လွှဲချော်မှု တစ်ခုခုရှိနေပြီ ဟုသုံးသပ်ရပါမည်။ ပြည်သူလူထု၏ဗဟုသုတ လေ့လာလိုက်စားမှု အားနည်းတာလည်း ပါနိင်သလို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်း အများကြီး ဆက်နွယ်နေလိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်ပေးရန်၊ အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း အရေးကိစ္စကြီးငယ်များပေါ်ပေါက်လာပါက ရှေ့ဆုံးမှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာ အချိန်သင့် အခါသင့် ဦးဆောင်လမ်းပြပြီး လိုအပ်သည့် ကွယ်ကာပံ့ပိုးမှုများပြုနိင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာ မိမိတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ေ၇ွှးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သည်မှာအားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများသည် ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပျက်နေသောကိစ္စကြီးငယ်များတွင် အမြဲတမ်းလိုလို ရှေ့တမ်းတွင်ရောက်မလာနိင်ခဲ့ကြပါ။ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ကိစ္စအစ ပလက်ဝစစ်ဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများအရေးအဆုံး အများပြည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်များတွင် နိုးနိုးကြားကြား တက်တက်ကြွကြွဦးဆောင်မူမပေးနိင်ခဲ့ပါ။( ပွဲဖြစ်ပြီးမှ ရောက်လာကြသည်) ဘောလုံးစကားနှင့်ပြောရရင်တေ့ာ ခြေစွမ်းမပြနိင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါသည်။ ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေမှု၊ ကျေနပ်မှု မပေးနိင်တဲ့အနေအထား ဖြစ်လာပါသည်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်းစသည် လုပ်ဆောင်မူများ အများကြီးပြုလုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟု လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းများအရ ကြားသိရပါသည်။သို့သော်လည်း ပြည်သူများ အနေဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် မည်သည့်ဥပဒေများကို ဆွေးနွေးအတည်ြပုကြသည်ကို ဂဃနဏမသိရပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ဗဟုသုတ အားနည်းတာလည်း ဖြစ်နိင်ပါသည်။ အစစအရာရာ နောက်ကျကျန်ရစ်နေသော မိမိပြည်နယ်အတွက် လိုအပ်သော မူဝါဒကောင်းများ၊ အနိမ့်ကျဆုံးသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများကို အမှန်တကယ် ဆွဲခေါ်မြှင့်တင်ပေးန်ိင်မည့် မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်များကို ထူးထူးခြားခြား မမြင်ရ မကြားရပါ။ ထို့ပြင် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများသည် အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရားများထက် မိမိတို့ဒေသနှင့် မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်သာ စိတ်ဝင်စားအလေးထားသည်မှာလည်း မမြင်ချင်အဆုံး အမြဲမြင်နေရသည်မှာလည်း စိတ်မကောင်းစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
မြင်သည့်အတိုင်းသာပြောရမည်ဆိုရင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၏ အဓိကတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်များအပေါ် အပြန်အလှန် ထိန်းညှိပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပျက်ကွက်နေသည်ဟုသုံးသပ်ရပါမည်။ မမျှတသောဘဏ္ဍာခွဲဝေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုက်ငန်းများအပြင် အစိုးရ၏အလုပ်မဖြစ်သော လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မူများကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ပြန်လည်တည့်မတ်ပေးမည့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများမမြင်ရပဲ အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို မှန်ကန်တည့်မတ်မှုမရှိသော်လည်း တရားဝင်ဖြစ်အောင် အတည်ပြုပေးသည့် အခြေအနေမျှသာဖြစ်လာပါသည်။
ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ပြည်သူလူထုနှင့် မီဒီယာများမှ အကြိမ်ကြိမ်ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြသော်လည် အစိုးရ၏အလေးထား တုံ့ပြန်မှုမရှိသဖြင့် နေပြည်တော်လွှတ်တော်သို့ မေးခွန်းမေးမြန်းရသည်အထိဖြစ်သွားခဲ့သော အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာခွဲဝေမူ အပေါ်တွင်လည်း တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူမှုမပြုပဲ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏လုပ်ရပ်မှာလည်း အင်မတန် စိတ်မကောင်းစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းပြင် ပြည်သူလူထု၊ မိဒီယာများနှင့် တစ်ချို့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၏ ဝေဖန်ထောက်ပြမူများကြားမှ အစိုးရ၏ ထပ်တိုးဘဏ္ဍာခွဲဝေမှုစီမံချက် ထွတ်လာသောအခါ ယခင်ကကဲ့သို့ အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ ထပ်မံတိမ်းစောင်း နေသော်လည်း ဤဘဏ္ဍာခွဲဝေမှုစီမံချက်ကိုပင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ အများသဘောတူညီချက်ဖြင့် အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုပေးခဲ့ပြန်ပါသည်။
စဉ်းစားစရာ ၃ မျိုး
ဤသို့သော အကြောင်းတရားများအပေါ် အခြေခံပြီး ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၏ အခြေအနေများကိုသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက
– ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ်၏ လိုအပ်သော အရည်အချင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ အရမ်းအားနည်းနေသလား
– ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို သဘောတူထောက်ခံသည့် တစ်လှေတည်းစီး အဖွဲ့အစည်းလား
– ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် တစ်ခုလုံးကိုမောင်းနှင်အမိန့်ပေးနေသော ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အဖွဲ့စည်းများလား စသည်ဖြင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေမိပါသည်။
သေချာတာကတေ့ာ အစိုးရ၏ လွှဲမှားသော စီမံခန့်ခွဲမူများနှင့် လွှတ်တော်၏ အလိုတူထောက်ခံပေးမှုများသည် ခေတ်သစ်လူငယ်များနှင့် နောင်လာနောက်သားများအတွက် ခါးသီးသော အတွေ့အကြုံများဖြစ်စေခဲ့ပြီး မိမိတို့ အချင်းချင်းကြားတွင် ယုံကြည်လေးစားမှုများပျောက်ဆုံးကာ မလိုလားအပ်သော သံသယများ တိုးပွားစေပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲစေမည့် အက်ကြောင်းများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ အစိုးရသည် မိမိတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ မရည်ရွယ်သည် ဖြစ်စေ အင်မတန် အဆိပ်ပြင်းသော အဆိပ်ပင်ကိုစိုက်ပျိုးမိသလိုဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အနေဖြင့်လည်း ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ မရည်ရွယ်သည် ဖြစ်စေ အဆိပ်ပင်ရေလောင်းပေးသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ဤသို့ပြောဆိုရာတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တစ်ခုလုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ရပ်တည်ချက်အပေါ်တွင်သာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ သဘောထားနှင့် ရပ်တည်ချက်များကို ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပြည်သူကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုသော ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများသည် ယနေ့ ခေတ်စားနေသော တင်ဒါလုပ်ငန်း၊ ဝန်ထမ်းရွှေးချယ်ခန့်ထားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်းထမ်းအပြောင်းအရွှေ့ဆိုင်ရာလုက်ငန်း စသည့် ရာထူးနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အခြေခံသည့် အမျိုးမျိုးသောကြားပွဲစားလုပ်ငန်းများကို ရှောင်ရှားကြလိမ်မည်ဟုယူဆမိပါ။ ထို့အတူ ယိုယွင်းနေသော အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍိုင်များကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ တည့်မတ်တွဲခေါ်ခြင်း၊ မိမိမဲဆန္ဒနယ်နှင့်ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကိုအကျိုးပြုသော ကောင်းမွန်မျှတသည့် ဥပဒေများ ပြဌာန်းခြင်း၊ လူထုကို ဝန်ပိစေသော ဥပဒေများပယ်ဖျက်ပေးခြင်း၊ ပြည်သူ့ဘဝ လုံခြုံမှုကို အာမခံပေးနိင်သော ဥပဒေများ ပြဌာန်းခြင်း၊ အများ မိုးခါးရေမသောက်ပဲ မိမိအမြင်နဲ့ခံယူချက်များပေါ်တွင် သတ္တိရှိရှိရပ်တည်နိင်ခြင်း၊ လူထု မျက်နှာကိုသာ ထောက်ထားပြီး မှန်တာကို တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လိပ်ပြာ သန့်သန့် ပြောရဲဆိုရဲခြင်း စသည့်မွန်မြတ်သောကိစ္စများကိုသာ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည် လို့မျှော်လင့်မိပါသည်။
အထက်ပါ သုံးသပ်ချက် အမြင်များသည် သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်၏ မြင်သမျှ ကြားသမျှ အချက်အလက်များဖြင့် ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Previous post ဟားခါးမြို့တွင် တည်မည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်မည့် သူရှိပုံမပေါ်ဟုဝန်ကြီးပြော
Next post မြို့နယ် ၁၇ ခုအတွက် အသုံးပြုမည့် ကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀ အနက် ချင်းပြည်နယ်မှ ၄ မြို့နယ်ပါဝင်